Riffle, usoro nchekwa nke MIT mepụtara karịa TOR | Akụkọ akụrụngwa
Riffle, usoro nchekwa nke MIT mepụtara karịa TOR
Ọ bụrụ n’itinyela nyocha ma ọ bụ banye DeepWeb ozugbo, ị ga-amata ihe ọ bụ Tor, acronym maka Onion Router, rue ugbua ihe ntanetị nke e ji mara usoro nchekwa ya nke ọma yana, na afọ ndị na-adịbeghị anya, abụrụla akara ngosi maka nkwukọrịta ịntanetị na-enweghị aha. N'ihi kpọmkwem nsogbu nke ikpo okwu nwere na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ebe a jụrụ ajụjụ banyere nchekwa ya, MIT nọ na-ahụ maka ịmepụta usoro ọhụụ ọhụụ emebere na aha Gbanye.
O doro anya na isi Tor ngwangwa Nke a bụ n'ihi na ọ bụrụ na onye ọrụ ọzọ anata ọnụ ọgụgụ zuru ezu na netwọkụ ha, ha nwere ike wughachi ha ka ha debe ngwugwu ma, n'ihi nke a, tinye aha ha na ụdị azụmahịa ọ bụla na-agabiga na ha. Nke bụ eziokwu bụ na o yikarịrị ka ị gaghị enwe ike ịmata ihe a na-ezipụ, mana ị ga-ama nwere ike imata ụzọ igodo nke otu onye ọrụ na-eji.
Riffle, ikpo okwu zuru oke iji kpochapụ nsogbu Tor
Riffle amalitelarị nwa akwụkwọ MIT, Albert kwon, nke dịdebere Polylọ Akwụkwọ Federal Polytechnic nke Lausanne. Dị ka nkwupụta sitere n'aka onye nrụpụta ya:
Tor na-achọ ịnye ngọngọ kachasị dị ala, nke mepere ụzọ ụfọdụ mwakpo. Riffle na-ezube inye oke nguzogide nyocha okporo ụzọ dị ka o kwere mee. Ha nwere ike bụrụ ndị na-emekọ ọnụ na ibe ha, na-eji nchekwa nke Riffle na nnukwu aha amaghị aha ndị Tor na-enye.
N'etiti myirịta nke nyiwe abụọ ahụ, na-akọwapụta, dịka ọmụmaatụ, na ha abụọ na-echekwa ozi nwere ọtụtụ ọkwa nke izo ya ezo, ihe dị iche na nke a bụ na Riffle, na mgbakwunye, na-agbakwunye ihe mgbakwunye abụọN'otu aka, ndị sava ahụ gbanwere usoro mbufe ahụ na usoro nke mere na ọ na-esiri mmadụ ike inyocha metadata na-abata ma na-apụ apụ. Nke abụọ anyị na-ahụ na a na-eziga ozi n'otu oge karịa na otu na-etinye usoro mgbakọ na mwepụ tupu oge eruo.
Na mgbanwe ndị a, Riffle ezubere dị ka ikpo okwu na-eguzogide ọgwụ na ọgụ na ọgụ. N'otu oge ahụ, ọ na-enye ịdị nro ma ọ chọghị oge dị ukwuu iji hazie ozi ahụ. Ihe na-adịghị mma bụ na, maka oge ahụ, Enweghi ike ibudata Riffle. Onye ode akwukwo ya kwuputara n'oge na-adighi anya ihichapu koodu a oge ufodu dika, n'oge a, odighi atumatu maka ahia ya ma obu iji nwaa dochie Tor.
Ozi ndi ozo: techcrunch
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Riffle, usoro nchekwa nke MIT mepụtara karịa TOR
Anyị ga-aghọtakwu otu obi anyị si arụ ọrụ ekele maka robot a na-agba gburugburu
Telecor malitere ire Xiaomi ngwaọrụ mkpanaka na Spain